Hooyo labo wiil ku weyday weerarkii Muqdisho - BBC News Somali
Image caption Goobta uu ka dhacay qaraxii Soobe
Iyadoo toddobaad laga joogo markii uu dhacay qaraxii lagu halaagsamay ee ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho, ayaa weli waxaa socda gurmadka loo fidinayo dhibanayaasha iyo dadkii ay dhibaatada kasoo gaartay.
''Hooyo waxaan weerarka ku waayay labo kamid ah wiilasheyda, mid aan habirir u ahay, mid ay qaraabo ahayeen ilmaheyga iyo xaaska mid kamid ah wiilasheyda oo carwa ku lahaa isgoyska Soobe,'' sidaasi waxaa BBC-da u sheegtay hooyo Xaawo.
''Markii la isoo sheegay geerida ubadkeyga waxaan ku sugnaa deegaanka Hobyo, oo waxaan halkaasi la joogay waalidiinti idhashay, waxaana Xamar imid iyadoo caruurteydi la aasay'' waxaa sidaasi BBC-da u sheegtay hooyo Xaawo.
Wasiirka warfaafinta Soomalaiya Eng. Cabdiraxman Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) oo shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in la xaqiijiyay in qaraxaasi ay ku dhinteen 358 qof iyo halka 228 qofna ay ku dhaawacmeen.